Degso Unlocker loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (0.16 MB)
Way fududahay in la tirtiro faylasha iyo fayllada aan lagu tirtiri karin Unlocker! Markaad isku daydo inaad tirtirto feyl ama galka kumbuyuutarkaaga Windows, Ficilkan lama sameyn karo maxaa yeelay galka ama feylku wuxuu ku furan yahay barnaamij kale. Xir faylka oo markale isku day iwm. Barnaamij aad u adeegsan karto hagaajinta qaladka aad hesho. Soo dejinta Unlocker waa bilaash iyo sida loo isticmaalo? Waa fayl iyo barnaamij tirtirka galka oo fududahay in la isticmaalo. Adigoo gujinaya batoonka Download Unlocker ee kor ku xusan, waxaad kala soo bixi kartaa nooca la qaadan karo (rakibid laaan, rakibid laaan) nooca kombiyuutarkaaga isla markaana bilaw inaad isla markiiba isticmaasho.
Soo Degso Unlocker
Unlocker waa barnaamij tirtirida faylka oo dadka isticmaala siiya xal wax ku ool ah oo ku saabsan tirtirka feylasha aan la soo dejin karin iyo tirtirka fayllada aan la soo dejin karin. Lama tirtiri karo feylka: Helitaanka waa la diiday. Dhibaatooyinka ka tirtirka faylasha iyo faylalka ku jira Windows, sida Isha ama faylka bartilmaameedka waa la isticmaali karaa., Faylka waxaa isticmaala barnaamij kale ama isticmaale. faylka hadda lama isticmaalin. ayaa xaliya.
Unlocker, oo ah barnaamij aad kala soo bixi karto oo aad ku isticmaali karto kombiyuutaradaada gebi ahaanba bilaash, asal ahaan wuxuu furaa feylasha iyo galka aan ka tirtiri karin kumbuyuutarkeena sababo kala duwan awgood, taas oo noo suurta galinaysa inaan tirtirno faylashaas iyo galkaas. Xaaladaha noocaas ah, nidaamka hawlgalka ee Windows wuxuu na siin karaa farriimo qalad oo kala duwan. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in nalagu wargeliyo innaannaan awood u lahayn inaan tirtirno faylka ama galka aan dooneyno inaan tirtirno. Fariimo kale oo qalad ah ayaa soo muuqan kara, sida feylka ama galka la tirtirayo waxaa isticmaalaya barnaamij kale ama isticmaale kale, feylka wali waa la isticmaalayaa, disk-ka waa la ilaaliyaa. Dhammaan kiisaskan, waxaad isticmaali kartaa Unlocker oo ka saar faylka ama galka.
Sidee loo Isticmaalaa Unlocker?
Unlocker laftiisa dhexgalaan kartaa xaq-guji menu menu. Markaad gujiso fayl iyo fayl kasta oo leh badhanka midig ee midig, waxaad arki kartaa toobiyeha Unlocker ee ku yaal menu-ka furmaya waxaadna bilaabi kartaa howsha furitaanka adigoo gujinaya toobiyedan. Unlocker ayaa ku qori kara kheyraadka xakameynaya qufulna u galaya feylka ama galka. Haddii aad rabto, waxaad ka saari kartaa xakamaynta dhammaan ilaha faylka ama galka hal guji. Tallaabadan ka dib, waxaa suurtagal ah in la tirtiro faylasha iyo faylalka aadan tirtiri karin kahor.
Midig u guji galka ama faylka oo xulo Unlocker.
Haddii galka ama feylka la xirayo, daaqad ayaa soo muuqaneysa oo liis garaynaysa keydiyaasha.
Kaliya guji Unlock All!
Unlocker waa barnaamij aad si fudud ugu adeegsan karto maxaa yeelay wuxuu ku yimaadaa taageerada Turkiga.
Fiiro gaar ah: Inta lagu gudajiro talaabooyinka rakibida barnaamijka, rakibida dalabyada loogu talagalay softiweerka saddexaad ayaa lasiiyaa dadka isticmaala. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad raacdo talaabooyinka rakibaadda si taxaddar leh.
Cabirka Faylka: 0.16 MB
Horumar: Cedrick Collomb